संकटमा पर्दै बाबुराम भट्टराई | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more संकटमा पर्दै बाबुराम भट्टराई
तत्कालीन नयाँ शक्तिका कतिपय नेताहरु पार्टी एकता गर्दा, पृष्ठभूमि र राजनीतिक कार्यदिशालाई तिजाञ्जली दिएको बताउँछन् । उनिहरुले फोरमसँग एकता नभई पार्टी विलय नै भएको धारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
काठमाडौं । पार्टी एकता गरेर एक नम्बरको पार्टी बनाउने ध्याउन्नमा लागेका तत्कालिन नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई संकटमा परेका छन् । पार्टी एकतामा असन्तुष्टी जनाउँदै दर्जनौं केन्द्रिय नेताहरुले पार्टी नै परित्याग गर्ने अवस्था आएपछि भट्टराई समस्यामा परेका हुन् । स्रोतले बताए अनुसार भट्टराईले पार्टी एकता गर्दा नयाँ शक्तिबाट गएका उच्च स्तरका नेतालाई पाखा लगाउँदै भागवण्डा गरेका थिए ।
यसरी गरिएको थियो भागवण्डा
समाजवादी पार्टी स्थापना गर्दा बनेको २५ सदस्यीय पदाधिकारीमा भट्टराईको तर्फबाट जम्मा ९ जना सदस्य परेका छन् । तत्कालीन समाजवादी फोरमले भने १६ सदस्य लिएको छ । समाजवादी पार्टीमा पदाधिकारीलाई विशेष स्थान मानिन्छ । पार्टी एकता गर्दा बनाइएको केन्द्रित समितिमा पनि अति न्यून संख्यामा तत्कालिन नयाँशक्तिबाट सामेल भएका छन् । चार सय ३१ जना केन्द्रीय सदस्य गठन गरिएकोमा नयाँ शक्तिबाट जम्मा एक सय ५१ मात्रै परेका हुन् ।
पार्टी एकता प्रति नै असन्तुष्ट
तत्कालीन नयाँ शक्तिका कतिपय नेता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसँग भएको पार्टी एकतामै असन्तुष्ट छन् । वैचारिक धार र पृष्ठभूमिलाई तिलाञ्जली दिइएको उनीहरुको तर्क छ । स्रोतले बताएअनुसार पछिल्लो चुनावी नतिजासँगै आत्तिएका भट्टराईले आफुँ निकट केही नेतासँग मात्रै छलफल गरी पार्टी एकता टुंग्याएका थिए । जसको कारण उनको समुहमा एकमत हुन सकेको थिएन । तत्कालिन नयाँ शक्तिका कतिपय नेताहरु सत्तारुढ नेकपा या वैचारिक रुपले समाजवादी धारका अन्य साना पार्टीसँग एकता गर्नुपर्ने लाइनमा थिए ।
कतिपय नेता नेकपामा प्रवेश गर्दै
संघीय समाजवादी फोरमसँगको एकताप्रति असहमती राख्दै आएकी नेतृ सिमा बिकले बुधबार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गरेकी छिन् । संविधान सभा सदस्यसमेत रहेकी नेतृ विक तत्कालिन नयाँ शक्तिमा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य थिईन् । उनलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी प्रवेश गराएका थिए । उनले वैचारिक आधार र पृष्ठभूमिलाई नै तिलाञ्जली दिंदै पार्टी एकता गरिएको बताएकी छिन् ।
उनीसँगै अन्य नेताले पनि पार्टी प्रवेश गर्ने भनिएपनि बुधबारको प्रवेश कार्यक्रममा अरु सहभागि भएनन् । स्रोतले बताए अनुसार डा. बाबुराम भट्टराईको निर्णयमा असन्तुष्ट करिब आधा दर्जनभन्दा बढि नेताले केहि दिनमै नेकपा प्रवेश गर्नेछन् ।
यी नेता हुन् असन्तुष्टी पोख्ने
पार्टी एकताको विज्ञप्ती आउँदै गर्दा तत्कालिन नयाँ शक्तिका नेता देवेन्द्र पराजुलीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चर्को असन्तुष्टी पोखेका थिए । उनले नेतृत्वको सोंच र शैली नै लोकतान्त्रिक नभएको बताएका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बोलाउने, सबैलाई कुराउने अनि दुई चार जना मात्रै बसेर निर्णय लिने। यो अलोकतान्त्रिक सोच र शैली हो ।’
उनीसँगै अन्य नेताहरु पनि एकता प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट छन् । तत्कालीन नयाँ शक्तिको पृष्ठभूमि र राजनीतिक कार्यदिशालाई तिजाञ्जली दिंदै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमसँग विलय भएको उनिहरुको आरोप छ । उनिहरुले फोरमसँग एकता नभई विलय भएको धारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
तत्कालिन नयाँ शक्तिका नेताहरु कल्पना धमला, ज्ञानेन्द्र कुमाल, देवेन्द्र पराजुली, रामरिझन यादव, मदन राई, राम बहादुर बोहोरालगायत नेताहरुले सुरुदेखि नै असन्तुष्टी पोख्दै आएका थिए । पार्टी एकता लगत्तै उनिहरुले छुट्टै भेला समेत बोलाएका थिए । जानकारी अनुसार असन्तुष्ट नेताहरुले समाजवादी पार्टी छिट्टै छोड्ने सम्भावना छ ।
बैशाख २६ गते, २०७६ - १६:०७ मा प्रकाशित